Fepetraky ny serivisy - JPEG.to
JPEG mankany PDF
PDF mankany JPEG
Ity ambany ity dia fandikana mavesatra amin'ny teny anglisy amin'ny serivisy momba ny serivisy momba ny serivisy ary amin'ny teny anglisy ho an'ny lafiny ara-dalàna izay mihatra amin'ny teny anglisy ihany
JPEG.to Toetran'ny serivisy
Amin'ny alàlan'ny fidirana ny tranokala amin'ny https://jpeg.to , manaiky ianao fa hofehezin'ireo fepetra momba ny serivisy ireo, ireo lalàna sy fitsipika rehetra azo ampiharina, ary manaiky ianao fa tompon'andraikitra amin'ny fanarahana ireo lalàna misy eo an-toerana. Raha tsy ekena amin'ireo fepetra ireo ianao dia voarara ny mampiasa na miditra amin'ity tranonkala ity. Ireo fitaovana voarakitra ao amin'ity tranokala ity dia arovan'ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona sy ny marika.
2. Mampiasà fahazoan-dàlana
Ny fahazoan-dàlana dia alaina misintona vetivety ny fakana fitaovana (fampahalalana na rindrambaiko) ao amin'ny tranokalan'ny JPEG.to ho an'ny fijerena ny fizahan-tany tsy misy varotra. Ity no fanomezana lisansa, tsy famindrana lohateny, ary eo ambanin'ity fahazoan-dàlana ity dia tsy azonao atao:
manova na mandika ireo fitaovana;
Ampiasao ny fitaovana ho an'ny tanjona ara-barotra, na ho an'ny fampisehoana ampahibemaso (tsy misy varotra) na tsia;
manandrana manongotra na mampivadika injeniera izay rindrambaiko misy ao amin'ny tranonkalan'ny JPEG.to;
esory ireo zon'ny mpamorona na fananana hafa amin'ny rakitra; na
afindranao amin'ny olon-kafa ny fitaovana ary 'fitaratra' ireo fitaovana amin'ny mpizara hafa.
Ity fahazoan-dàlana ity dia ho tapitra eo ho eo raha toa ianao ka manitsakitsaka ny iray amin'ireo fetrany ireo ary mety ajanonan'ny JPEG.to amin'ny fotoana rehetra. Rehefa tapitra ny fijerinao ireo fitaovana ireo na rehefa tapitra izany fahazoan-dàlana izany dia tsy maintsy aringanao daholo izay fitaovana alaina anananao na amin'ny endrika elektronika na vita pirinty.
Ireo fitaovana ao amin'ny tranokalan'ny JPEG.to dia omena amin'ny fototry ny 'as is'. JPEG. dia tsy manome antoka, voambara na voamarina, ary eto dia manilika sy mandà ny antoka hafa rehetra, ao anatin'izany, tsy misy fetrany, ny antoka tsy misy fahazoan-dàlana, ny fiasa ho an'ny tanjona manokana, na ny tsy fanitsakitsahana ny fananana ara-tsaina na ny fanitsakitsahana ny zon'ny hafa.
Ankoatr'izay, JPEG.to dia tsy manome antoka na hanao fisolokiana momba ny marina, vokatra mety, na fahatokisana ny fampiasana ireo fitaovana eo amin'ny tranokalany na amin'ny fomba hafa mifandraika amin'ireo fitaovana ireo na amin'ny tranokala mifandraika amin'ity tranokala ity.
Raha tsy izany dia tsy maintsy tompon'antoka amin'ny fatiantoka rehetra i JPEG.to na ny mpamatsy azy (anisan'izany, tsy misy fetra, fahavoazana noho ny fahaverezan'ny data na tombony, na noho ny fanelingelenana amin'ny raharaham-barotra) noho ny fampiasana na ny tsy fahaizana mampiasa ireo fitaovana amin'ny JPEG.to's tranokala, na dia JPEG.to na solontenan'ny JPEG.fa nahazoana alalana am-bava aza na an-tsoratra ny mety hisian'izany fahavoazana izany. Satria tsy avelan'ny fahazoan-dàlana sasany amin'ny fetra azo antoka, na ny fetran'ny andraikitra noho ny fahavoazana mety hitranga na ny zava-mitranga, dia tsy mihatra aminao ireo fetra ireo.
5. Ny fandraisana ny fitaovana
Ny fitaovana hita ao amin'ny tranokalan'ny JPEG.to dia mety misy hadisoana ara-teknika, typografika na sary. JPEG.to dia tsy manome antoka fa ny fitaovana rehetra ao amin'ny tranokalany dia marina, feno na ankehitriny. JPEG. dia mety hanao fanovana amin'ireo fitaovana ao amin'ny tranokalany amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampilazana. Na izany aza, ny JPEG.to dia tsy misy ny fanoloran-tena hanavao ireo fitaovana.
JPEG.to dia tsy nijery ny tranokala rehetra mifandraika amin'ny tranokalany ary tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatin'ny tranonkala mifandraika amin'izany. Ny fidiran'ny rohy rehetra dia tsy midika akory ny fankatoavana an'i JPEG.to amin'ny tranokala. Ny fampiasana tranonkala mifandraika amin'izany dia atahorana ho an'ny mpampiasa manokana.
JPEG.Ao mety handinika ireo fepetra momba ny serivisy ireo amin'ny tranonkalany amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampilazana. Amin'ny fampiasana ity tranonkala ity ianao dia manaiky fa hofehezin'ilay dikan-teny atokana ho an'ny vanimpotoana ankehitriny.
Ireo fepetra sy fepetra ireo dia fehezin'ny sy voarindra mifanaraka amin'ny lalàn'i Connecticut ary manaiky tsy ara-dalàna ny fitsarana manokana ao amin'ny Fanjakana na ny toerana misy azy ianao.
Miova fo avy amin'ny JPEG
JPEG mankany Teny
JPEG mankany PNG
JPEG mankany ICO
JPEG mankany SVG
JPEG mankany JPG
JPEG mankany BMP
JPEG mankany amin'ny JFIF
JPEG mankany ZIP
JPG mankany Word
JPG mankany PNG
JPG mankany ICO
JPG mankany SVG
JPG mankany BMP
JPG mankany amin'ny JFIF
JPG mankany ZIP
JPG mankany DOC
JPG mankany DOCX
JPG mankany amin'ny WebP
JPEG mankany DOC
JPEG mankany DOCX
JPEG mankany amin'ny WebP
JPEG hatramin'ny GIF
JPEG mankany TIFF
JPG mankany TIFF
JPEG mankany PSD
JPG mankany PSD
Miova fo amin'ny JPEG
Teny amin'ny JPEG
PNG mankany JPEG
ICO mankany JPEG
SVG mankany JPEG
JPG mankany JPEG
BMP mankany JPEG
JFIF mankany JPEG
PDF mankany JPG
Teny amin'ny JPG
PNG mankany JPG
ICO mankany JPG
SVG mankany JPG
BMP mankany JPG
JFIF mankany JPG
DOC mankany JPEG
DOC mankany JPG
DOCX mankany JPEG
DOCX mankany JPG
WEBP mankany JPG
WEBP mankany JPEG
GIF ho JPEG
TIFF mankany JPG
TIFF mankany JPEG
PSD mankany JPG
PSD ho JPEG
5,285 fiovam-po nanomboka tamin'ny 2020!
politika Fiarovana fiainan'olona - Fepetraky ny serivisy - Mifandraisa aminay - Momba ANAY - API
Nataon'i nadermx - © 2021 JPEG.to
Nihoatra ny fetran'ny fiovam-po nataonao isaky ny adiny iray ianao, afaka manova ny rakitrao ianao 59:00 na Daftar ary mivadika dieny izao.
Manjary PRO manome anao ireo endri-javatra ireo
☝ Fiovam-po tsy voafetra
🥇 Fiovam-po OCR
🐱 Ny laharam-pahamehana
🚀 Safidy fangatahana safidy
☝ Mandefa fandefasana batch mba hahafahanao mihodina sy manary fatrana betsaka isaky ny mandeha fa tsy iray